SEO Anwụla | Martech Zone
SEO anwuola dika anyi matara. Ochie mgbakọ na mwepụ nke backlinks na nri Keywords ugbu a bụ ihe mgbaru ọsọ maka Google iji chọpụta saịtị gị ma lie ya na nsonaazụ ọchụchọ. SEO abụghịzi nsogbu mgbakọ na mwepụ, ọ bụ mmadụ. Ndị na-egosi mmekọrịta mmadụ na ibe na-aghọ isi nke ogo na njikọta algọridim na-lara ezumike nká. Oge eruola ka ị hụ eziokwu banyere SEO… ma mezie ya.
O doro anya na anyị jiri aha baity mara mma iji dọta uche ụfọdụ, mana oge eruola onye bilie ma kwuo ya. Omenala SEO abughizi ihe ngosiputa ahia nye ulo oru itinye ego na ya. Odi - ndi mmadu ka na-eji igwe ha acho ihe… ma anyi ka na eme ka ndi ahia anyi noro na ngwa ngwa nke na eweta ihe ha n’uzo nke oma. Mana anyị anaghịzi eji usoro ochie nke ịnwa ịchọpụta otu ị ga-esi apịa mkpụrụ okwu ma ọ bụ iji nweta backlinks n'ụzọ ọ bụla dị mkpa.
Eziokwu, ngwugwu SEO ohuru gafere njikarịcha saịtị na ụlọ njikọ ma tinye ntughari ntughari iji chọpụta isi okwu, ide ihe ndị na-akpali akpali, na-eme ka ọ dịrị ndị na-agụ ya mfe ịkekọrịta ọdịnaya ahụ, iji njikọ mmekọrịta ọha na eze chọta ohere ịkekọrịta ọdịnaya ahụ, na ịkwalite ịba ụba nke ọdịnaya ahụ.
E gosipụtara nkwado a na mbụ site na webinar Ngwakọta. Taa ọ na-agba na home page nke Slideshare!
Mmelite 10/4/2012: Google emelitere ntuziaka Webmasters ya na kpọmkwem ezubere iche atụmatụ njikọ ma na-atụ aro ịhapụ ụzọ njikọ niile akwụgoro ụgwọ.
Tags: backlinkingisiokwu njupụtaisiokwu ojijiKeywordsọhụrụ seon'elu ikpo okwuChọọ Marketingseo anwuolaahịa mmadụnkwalite mmekọrịta mmadụ na ibe yaọdịnala seo
Gwọ nke Ule Weebụ
Apr 6, 2012 na 9: 14 PM
Njikọ peeji nke mebere imirikiti ike tupu. Ugbu a, “votu” ndị ahụ anyị na-achọ ịnakọta ewerela n'ụdị nke mmekọrịta (mmekọrịta).
Dị ka ọ dị na mbụ, naanị mee nnukwu ihe ndị mmadụ chọrọ ịkọrọ onye ọ bụla. Ma ọ kwụsịghị ebe ahụ. Ọ dị mkpa ka mmadụ nweta ya - were Jason dịka ọmụmaatụ. Chọrọ ijikọ ya (n'ihi ezigbo omume ụwa ya) & ịchọrọ ịkekọrịta oke ihe ọ na - emepụta - nke na - eduga n'ụdị ntụgharị nke ga - abara ya uru. (ma ọ bụ gị)
Nnyocha abughi ihe nwuru anwu, otu i si egwuri egwu n'etiti iwu Google.
Apr 6, 2012 na 11: 07 PM
Ọma tinye! Ọchụchọ anwụbeghị… Ekwenyere m. Ma ike iku gos folks ka egwuregwu na usoro m maa anwụ! 🙂
Apr 7, 2012 na 8: 14 AM
Ezi ihe ezigbo SEO abụghị maka ịgba egwu sistemụ
Apr 7, 2012 na 4: 47 PM
Ọzọ. Ruo ogologo oge, o kwela ka ndị na-azụ azụ na-aghọ aghụghọ ma merie!
Ọkt 22, 2012 na 8:19 AM
Ikwesiri igbanwe okwu gi ebe a Douglas, bu backlinker nwa okpu SEO? Backlinking adịghị njọ ya n'ezie dị mkpa. Iji usoro okpu azụ bụ aghụghọ na egwuregwu sistemụ. Ezigbo onye na-eme SEO nke ọma na-elekwasị anya na njikọ site n'ọtụtụ atụmatụ
Apr 9, 2012 na 5: 16 AM
Site na blọọgụ m atọ na-enweta spammed na backlinks, Obi ga-adị m ezigbo ụtọ ịhụ ụdị a na-apụ na ejiji! Nnukwu achịcha, ọ bụ maka ezigbo ọdịnaya na njedebe - ọ dị mma enwere m olile anya!
Ọkt 26, 2012 na 6:30 AM
Ọnwa asaa ka e mesịrị na blog spam njikọ na-abịa! N'agbanyeghị nke ahụ, ọchịchị ọhụrụ ahụ dị mma maka anyị nke na-echebara ọdịnaya na nlekọta banyere nsonaazụ kacha mma na-abịa site na nchọta google
B'wire na-agba izu
Apr 9, 2012 na 5: 48 AM
Ochicho ihe anwughi anwu egbu, mana o meputara site na ijiwanye sava websaịtị. A na-eji Twitter dịka njin ọchụchọ nke mbubreyo. 🙂
Apr 9, 2012 na 10: 51 AM
Google nwere mmasị n'ihe ndị ọrụ ya ga-amasị. Yabụ, ịchọghị ịkwalite nke ukwuu maka igwe nchọta ihe ịchọrọ maka ndị na-ege gị ntị. Mepụta ọdịnaya dị ukwuu nke ị maara na ndị na-ege ntị ga-erite uru.
Apr 10, 2012 na 1: 04 PM
Ọ ga-amasị m ịhụ ndị mmadụ ịtọhapụ ọmụmụ ihe na-egosi n'ụzọ doro anya "ihe kpatara" n'etiti ọkwa dị elu na mmekọrịta mmadụ na ibe. N'ọtụtụ oge, nke a ka bụ akara ngosi na-esighi ike. Nkekọrịta mmekọrịta na-eduga na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị mma dị ka nleta, ma eleghị anya njikọ nke abụọ dị ka nsonaazụ nke eyeballs wdg. ụzọ. O doro anya na ha ga-emecha.
Ọzọkwa, ọ ga-arụ ụka ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ịmalite ịtụba ihe ọhụrụ na SEO. Ọ pụtara "Nchọgharị Ngini Nchọpụta". Ntughari na-eme na saịtị ma ọ nwere obere ihe ọ ga-eme na ịnwepụta peeji maka engines ọchụchọ. Anaghị m ekwu na nke a adịghị mkpa ụlọ ọrụ. Mana ahuru m na otutu ndi mmadu na-achota ihe ohuru n'ime ihe SEO putara, obuna mgbe ha nwere obere uche.
Na isi zuru oke m kwenyere n'echiche nke oche slide mana ekwenyeghị m na "njikọ azụ… agakwaghị emetụta azụmahịa gị dịka ide ederede ọdịnaya". Nke a dabere na ọtụtụ ihe, nke bụ eziokwu bụ na ị chọrọ ma, onye kwesịrị ịkwọ ụgbọala nke ọzọ.
Adam Ikpe ziri ezi
Aug 2, 2012 na 8:22 PM
ị bụ ******* smart. Enweghi ihe kpatara ya. Nsonaazụ dị elu nwere ihe Facebook masịrị n'ihi na ha na-enwetakwu okporo ụzọ, ma yikarịrị ka ọ ga-adị elu karịa ịmalite (ihe ndị sụgharịrị na mma na-atụgharịkwa gaa n'ọkwa ọchụchọ dị elu). O doro anya na nsonaazụ kachasị elu maka okwu asọmpi nwere ọtụtụ omume mmekọrịta ọha na eze, mana ha anaghị edebanye aha ha elu n'ihi omume mmekọrịta mmadụ na ibe - ha nwere omume mmekọrịta ọha na eze n'ihi na a na-ahọrọ ha n'elu. Agbalịrị m nke a ka m nwụọ n'ofe dị iche iche, Ọ B ISGH CA Ọ B CA ỌR - - na achọrọ m iku gị ụgwọ maka post post.
Aug 2, 2012 na 8:48 PM
Ntu ya n'isi - kwenyere na gị.
Sep 17, 2012 na 12:37 PM
@searchbrat: disqus @etelligence: disqus @ twitter-15353560: Google a kwadoro na 2010 na ejiri mmekọrịta mmadụ iji chọpụta ikike maka ogo na vidiyo a: http://www.youtube.com/watch?v=ofhwPC-5Ub4
Mgbanwe algorithm na-adịbeghị anya na-aga n'ihu ịkwado ya nke ọma. Branded3 mere ule di mfe site na iji Twitter Retweets. http://www.branded3.com/tweets-vs-rankings
Enwekwara nchoputa ebe a: http://liesdamnedliesstatistics.com/2012/06/social-media-shares-indicate-a-high-google-ranking.html
Ma ekwenyeghi m na obi m dum na gi na backlinking. Atụmatụ Backlinking na-emerụ weebụ ma na-eme ka ibe ndị dara ogbenye dị elu. Google ugbu a na-adọ aka na ntị webmasters n'ime Ngwaọrụ Webmaster mgbe backlinks yiri ka ọ bụ ihe na-ekwekọghị n'okike. Ọ bụrụ na ha enwetabeghị, ha ga-emetụta ọkwa gị n'ụzọ na-ezighi ezi. Zọ kachasị mma iji mepụta backlinks bụ ịmịpụta ọdịnaya na -emepụta ha n'ụzọ nkịtị… ịgaghị ịmanye ha. Ọ bụrụ na ị na-emere ndị ahịa ahụ, ị ​​na-emebi Usoro Ọrụ Google ma ọ ga-alaghachi iji kpata onye ahịa gị.
Ọkt 22, 2012 na 8:12 AM
E nwere ọdịiche dị n'etiti backlinking (black hat tactics) na usoro njikọ njikọ siri ike. Ighaghi ikwu backlinking di njo ma adighi agu ozo. Ikwesiri ịkọwa okwu. Gwa ndị na - agụ akwụkwọ gị na backlinking dị njọ, adịchaghị mfe ma nwee ike iduhie gị. Google na-eleba anya na njikọ spammy na ọ bụghị njikọ dị mma. Ya mere, ịzụta ala àgwà njikọ bụ ihe ọjọọ tactic ma nnọọ mkpa iji nweta njikọ !! Ọ bụrụhaala na e nwere igwe ọchụchọ ga-enwe Nchọgharị Ngini Nchọgharị. Usoro na usoro nwere ike gbanwee mana nke ahụ apụtaghị na ọ nwụọla!
Onye ọrụ Facebook
gbalịa ọzọ, igurube, backlinking abụghị nwa okpu si eme. ọ ka mma ịgwa onye ọ bụla na ị na-eme seo.
Azụ backlink eke adịghị, backlink akwụ ụgwọ bụ. Ọ bụrụ na a na-akwụ gị ụgwọ na backlink, ị bụ okpu ojii. Anyị anaghị agwa ndị mmadụ na anyị “na-eme SEO”, anyị na-agwa ha na anyị nwetara nsonaazụ azụmaahịa ma nwee ike inye aka dozie nsogbu ndị SEO nyocha webatara na-etinye ha n'ihe egwu.
Apr 10, 2012 na 2: 36 PM
Agụọla m ọtụtụ blọgụ na-ekwupụta ịdị irè nke ọdịnaya. Ọdịnaya, ọdịnaya, ọdịnaya !!! Mgbe m kwenyere, Ọ ga-amasị m ịhụ ọkwa na-agbaghasị ụzọ ndị ahịa nwere ike isi nye ndị ahịa ha ozi na-atọ ụtọ ma dọrọ ha ka ha lelee weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ ahụ.
Ọ bụrụ na ọdịnaya bụ isi, olee otu ị ga-esi kọwaa ọdịnaya “dị mma”?
Apr 10, 2012 na 6: 45 PM
Mara m mfe. Ezigbo ọdịnaya bụ ọdịnaya na-akpali ndị ọbịa ime ihe ị na-agwa ha ka ha mee. Maka ụlọ ọrụ ọ bụla, nke ahụ nwere ike ịdị iche. Maka ụfọdụ ụlọ ọrụ, ọ bụ obere vidiyo. Maka ndị ọzọ, ọ bụ akwụkwọ ogologo. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ịtọlite ​​nyocha nke ọma ma dezie mmemme na mkpọsa gị niile. Gbalịa ihe niile… mejuputa, nwaa, tụọ, nụchaa ma megharịa.
Apr 12, 2012 na 6: 24 AM
Kpọmkwem. Ọdịnaya bụ Eze! Ugbu a karịa mgbe ọ bụla. Ọ bụrụ na ị nwere ọdịnaya freaky, saịtị gị ga-adọta ndị ọbịa na njikọ na-enweghị SEO-Campaign. Naanị dị iche ma dee ihe mmụta na ọdịnaya pụrụ iche.
Apr 16, 2012 na 8: 08 AM
N'ọnọdụ ịgbaso isiokwu, mmadụ kwesịrị ide maka ndị mmadụ n'ihi na na njedebe engines na-eso ndị mmadụ ma ọ bụghị Keywords.
Jul 22, 2012 na 2:51 PM
nye ụbọchị na isiokwu gị nwoke. sheesh
Sep 2, 2012 na 5: 30 AM
Egwu dị egwu. Daalụ maka ịkekọrịta dị mma.
Sep 11, 2012 na 6: 53 AM
N'ịbụ onye edemede, enwere m ekele maka mbugharị Google mana ọ bụrụ na m na-eche site na ngalaba nke Co., SEO abụghị ihe ọjọọ.
Sep 19, 2012 na 4: 26 AM
Ọdịnaya ị mepụtara maka mgbasa ozi mgbasa ozi dịka akara adịghịzi adị ọ gwụla ma ọ nwere mmekọrịta dị mkpa na ndị na-ege gị ntị. Nwere ike ikwu ihe ọ bụla ịchọrọ dị ka onye na-elekọta mmadụ mgbasa ozi mana ọ gwụla ma ndị mmadụ nwere mmasị ige ntị n'ihe ị na-ekwu na ị na-enweghị isi na-acha ọcha-mkpọtụ nke na-adịghị ahụ na oriri mmanya- na ka anyị chee ya ihu, Facebook bụ mmanya kachasị elu. oriri, na ma ọ bụ na-enweghị mmanya.
Ihe bụ nsogbu bụ na ọtụtụ ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi "ọkachamara" na-mindless na-ekwughachi ihe e kwuworo site na onye n'ezie chere banyere ihe ha na-aga ikwu tupu ha nanị kwuru ya, ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ na-eche n'ihu nke ubiquitous pịa ntọhapụ na mgbasa ozi mgbasa ozi n'ịntanetị. Ndị a bụ ndị na-ede blọgụ dị ebube karịa, ma ọ bụ ndị na-akwụ ụgwọ na-anaghị akwụ ụgwọ na-achọ ibi ndụ akwụghị ụgwọ site na ị byomi na ịdefe ọdịnaya onye ọzọ.
Sep 22, 2012 na 2: 47 AM
SEO karịrị SPAM. Njikọ dị mkpa ugbu a na n'ọdịnihu, mana enwere ọchịchọ dị elu maka mma.
ọtụtụ njikọ bụ naanị spam.
Sep 28, 2012 na 2: 37 AM
Nice dee elu, Douglas! Na mbá »I, m chá» pá »to tara gi ihe ohuru maka ikwuputa SEO anwuola! MA M gụrụ akwụkwọ ahụ dum ma kwenye gị! Kudos!
Ọkt 1, 2012 na 8:51 AM
SEO anwụghị. Ekwetaghị m. Ọ bụ oge ịgbanwe usoro dị iche iche. Ọ bụ ya.
Ọkt 6, 2012 na 4:59 AM
Nnukwu ọdịnaya, SEO adịghị anwụ anwụ mgbe niile 🙂
Ọkt 12, 2012 na 5:45 AM
SEO anaghị anwụ anwụ - ya ghọrọ usoro ma ka na-agbanwe! Nice njikọ nri idide 😉
Ọkt 15, 2012 na 5:20 AM
Ọkt 19, 2012 na 3:33 AM
Ekwenyere m na maka engines ọchụchọ dị ka Google "Ọdịnaya bụ eze" mana ọ ka dịkwa mma njikọ gbasara ihe maka ogo.
Ọkt 23, 2012 na 6:55 AM
SEO nwuru anwu .. onye ozo nzuzu n’enweghi obi ojoo.
Ọkt 23, 2012 na 12:15 PM
Adịghị m blogger na-enweghị isi na Steve. My gị n'ụlọnga na-eme nke ọma mgbe na-akpọ “SEO genlọ ọrụ” na-anwụ na anyị na-na-niile ha jikwaa ahịa.
Nov 6, 2012 na 3:34 AM
LOL: Echere m na SEO dị na nkwarụ mgbe ihe mechara na okporo ụzọ.M kwenyere na ndị agadi ahụ na-anwụ anwụ na-agbasi mbọ ike na-achịkwa "ọdịnaya bụ eze". Google, ụlọ ọrụ ọ bụla dị otú ahụ, ga-anwa "ịnwa" ịkwanye envelopu ahụ.
Nov 20, 2012 na 5:05 AM
Onu ogugu kwenyere Douglas, ma ufodu oge tinyekwara google na ọdịnaya. gbaa mbọ hụ na ihe ị chọrọ ebipụta ọhụụ ma ọ bụ ụzọ ọ bụla pụrụ iche.
Jun 15, 2013 na 4:11 AM
Ọmarịcha ọkwa. Ma SEO
anwughi anwu. Ọzọkwa ezi njikọ ka dịkwa mkpa maka ogo.
Jun 18, 2013 na 9: 50 PM
hay hụrụ n'anya
Sep 23, 2013 na 1: 59 AM
SEO ohuru, na usoro ise:
1. Mepụta otu edemede nwere aha aghụghọ ma na-adọrọ mmasị.
2. Dee ederede blog na obere ọdịnaya.
3. Bombard ọrụ na ọtụtụ ụzọ ịkọrọ kwuru isiokwu.
4. Ekwu okwu banyere enweghị ojiji nke njikọ dị na peeji nke jupụtara na njikọ.
5. Na-anakọta ego ego.
Sep 23, 2013 na 10: 32 AM
Ebee ka ụgwọ ọnwa m dị? 🙂
Nov 22, 2013 na 2:55 PM
Daalụ maka ide ihe a. Ana m arịa ọrịa ma ike gwụrụ m n’ihe SEO pundits nwere ikwu.
Dee 5, 2013 na 1: 25 AM
Edemede a kwenyesiri m ike na achọghị m SEO SEO ịchọpụta ihe ọ bụ. Enwere m ike ịchọpụta ihe niile m chọrọ ịma: ọ bụ okwu acronym nke na-agba mbọ ijide ma ọ gaghị eme n'ezie.
Dee 9, 2013 na 1: 52 AM
Bahahaha nke a bu nnoo. Echetara m otu isiokwu Pesach Lattin mere obere oge. Maa amụma?!! Ọdịnaya Ahịa bụ SEO !! Nginggbanwe iwu anaghị agbanwe egwuregwu ahụ. A na-akpọ ya evolushọn. Anyi ka na egwu Basketball ebe a.
Ọkt 22, 2015 na 4:24 PM
yup, ndi nwuru anwu. Akwa ọzọ ederede ebe a na-akọwa ya. Nchọgharị ọchụchọ bụ ọgba aghara na ka ha na-agbanwe ihe (algorithms wdg) nke na-emebi emebi. Mgbasa mgbasa ozi na-ekpebi ihe onye ọrụ mepụtara ọdịnaya ha chọrọ, nke ọma karịa. Ejikọtakwara engines ọchụchọ na Facebook na twitter, yabụ gịnị kpatara ịchọrọ Google? Nwere ike ịchọta ụlọ ọrụ na ozi ị chọrọ na mgbasa ozi mmekọrịta.
Jun 1, 2016 na 3:22 AM
Daalụ maka ịkekọrịta..Ma ugbu a, ọgba aghara dị ebe a, mmadụ na-ekwu na SEO anwụghị ma onye na-ekwu na SEO anwụọla. Kedu nhọrọ ziri ezi.
Jun 1, 2016 na 11:00 AM
SEO ugbu a gunyere ma choro nka karia ndi ozo. Imirikiti ụlọ ọrụ SEO dị ọcha anyị maara agafeela, ihe fọdụrụ bụ ụlọ ọrụ ndị ghọtara foto buru ibu ma ghọta otu esi emepe ọdịnaya, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mkpanaka, yana atụmatụ PR - na-agbasi mbọ ike ime ihe niile.
Ọkt 17, 2016 na 8:02 AM
Onwere m na-ekweta na isi nke mmetụta, ma chefuo “SEO bụ ihe nwụrụ anwụ” na-eche kama ihe banyere “SEO ghọrọ usoro.” O doro anya na ị na-eme ochie SEO (ọtụtụ isiokwu ejiri backlinks, na / ma ọ bụ isiokwu na-eri nri) nwụrụ anwụ dị ka ọnụ ụzọ ụzọ, mana echere m na ọ bụ ihe ziri ezi na-arụ ụka na GOOD SEO (ma ọ bụghị ọtụtụ SEO) bụ n'ezie UXO site na aha ọzọ.
Ọ bụ ihe niile gbasara ịkwalite ahụmịhe nke onye ọrụ site na mbido mbụ gaa n'ihu (ma ọ naghị agwụ na ntughari ma ọ bụ kọntaktị ma ọ bụ "tinye ihe mgbaru ọsọ ebe a" dị ka ọtụtụ ndị yiri ka ha na-eche), na mgbe nke a nwere ike na-agụnye ụfọdụ echiche dịka markup na commonsense “njikarịcha” ọtụtụ nke na-Juda gbadara ezi, inweta web ewuli na dị nnọọ larịị ochie nkịtị uche.
Nsogbu dị m na-eche bụ na ọtụtụ mmadụ na-eche SEO na silo dị ka ihe ị na-eme iche iche - ebe n'ezie, ọ bụrụ na ị na-eme ya nke ọma, SEO bụ ihe ị ga - eme n'ụzọ ọ bụla ka ị na - azụ ahịa dịka ọ dị na mbụ maka weebụsaịtị gị. Ekwesiri ileda ya anya dị ka ihe "ahia" na ihe dị ka "ịdị ọcha", dị ka ịkọ afa!